PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-18 - Bahilane nenkosi ngodaba lwemayini endaweni
Bahilane nenkosi ngodaba lwemayini endaweni
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-18 - IZINDABA - THOKOZANI NDLOVU
KUCISHE kwabanjwana ngezandla emhlanganweni womphakathi obubizwe yiNkosi yaseMdletsheni ngoLwesithathu, eZibayeni, eHluhluwe.
Inkosi uBonga Mdletshe ichithwe umphakathi ngemuva kokuphakamisa ukuthi kugudluzwe ezinye izakhamuzi zasendaweni yayo ukuze kwakhiwe imayini yamalahle eDukumbane.
UMdletshe ubezokwazisa abantu ngemayini yamalahle ezoba sendaweni. Iningi lamalungu omphakathi abehambele lo mhlangano azwakalise ukunganeliseki ngesiphakamiso senkosi. Akhale ngokuthi inkosi ayethembekile, futhi asola ukuthi ifuna ukudayisa ngabantu ngokuvumela ukwakhiwa kwemayini yamalahle eDukumbane.
Aphinde aveza ukuthi iNkosi uMdletshe useke wawakhohlisa amalungu omphakathi wawagudluza ezindaweni zawo ngesikhathi kuvulwa isiqiwi iThanda Game Reserve.
Ngokusho kwamalungu omphakathi, inkosi yathembisa abantu amathuba omsebenzi ngesikhathi begudluzwa endaweni yabo iphendulwa isiqiwi iThanda kodwa kwagcina kungasebenzi muntu wasendaweni.
Elinye ilungu lomphakathi, uMnuz Mandlakhe Mkhize, liphakamise ukuthi umhlangano uhlehliswe ngoba umphakathi awuphelele njengoba kukhona abasebenza eGoli ababuya ngamaholidi kaDisemba.
“Sixhumanile namanye amalungu emindeni yethu asebenza eGoli asitshela ukuthi akumele uqhubeke umhlangano engekho. Sicela inkosi iwuhlehlise bese kukhulunywa sekukhona wonke umuntu,” kusho uMkhize.
Okunye okuphinde kwavela kulo mhlangano ukuthi amalungu omphakathi abesola ukuthi uMdletshe usesisayinile isivumelwano sokuthi kwakhiwe imayini endaweni nenkampani ezosingatha lo msebenzi, umphakathi ungatsheliwe.
UMdletshe uthe besingakasayinwa isivumelwano sokuthi kube nemayini, yingakho ebize umhlangano.
“Ukubakhona kwale mayini yinto eqale ukukhulunywa ngo-2012. Ngicele ikomiti lami ukuthi lixhumane nalaba abafuna ukwakha imayini endaweni ukuze ngithole ubuqiniso balokho. Indlela abakhuluma ngayo bakhombise ukuzimisela njengoba sekunezinhlelo zokwakhiwa kwayo ezizoqala ngoJanuwari ngonyaka ozayo,” kusho uMdletshe.
Uphinde wacela umphakathi ukuthi ungamubizi ngomdayisi ngoba ubize umhlangano ngenhloso yokuzwa uvo lwawo ngaphambi kokuba kuqale ukwakhiwa kwemayini.
Umhlangano kugcine kuvunyelwene ngokuthi uphinde ube ngoDisemba.
Ithintwa ngocingo iNkosi uMdletshe ithe: “Kusekusha ukuthi ngingadalula okuningi ngemayini. NgoJanuwari kuzobe kushuthwa phezu kwemizi ukuze kubonakale ukuthi yimiphi ethintekayo ezosuswa. Nendawo abazoyiswa kuyona ayikakahlonzwa, kusazoba nezingxoxo. Uma ingekho imizi ethintekayo akekho umuntu ozosuswa.”